पहारी बठनियापछि चर्चामा बिशाल चौधरी ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
पहारी बठनियापछि चर्चामा बिशाल चौधरी !
मुम्बई । विशाल चौधरीले अभिनय गरेको पहारी बठनिया म्युजिक भिडियो यतिबेला संगीत बजारमा चर्चित बनेको छ । सामाजिक बिषयबस्तुमा आधारित म्युजिक भिडियो दर्शक, स्रोताले मन पराएका छन् । भिडियो पहाड र तराईका केटाकेटी बीचको माया प्रेममा आधारित रहेको विशाल चौधरीले जानकारी दिए । म्युजिक भिडियोमा विशाल चौधरी र सुमन चौधरी प्रेमी र प्रेमिकाको अभिनयमा रहेका छन् ।
विशालले आफ्नै समुदायको भुमिका निभाएका छन् भने सुमनले पहाडी उच्च परिवारको भुमिकामा छिन् । भिडियोले अन्तर समुदाय, अन्तरजातीय र निम्न तथा उच्च वर्गका मान्छेहरु बीचको प्रेम सम्बन्धका बारेमा प्रस्ट बोलेको चौधरीले बताए । भिडियो पछिल्लो पुस्ताका युवा, युवतीहरुकै प्रेम परिदृश्यका गतिविधिहरुमा आधारित छ । म्युजिक भिडियो युटुवमा सार्वजनिक भएपछि, सबैबाट सकारात्मक चर्चा र टिप्पणीहरु पाएको, निर्माता समेत रहेका विशाल चौधरीले जानकारी दिए ।
भिडियोको सुटिङ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुन्दर स्थालहरु भासुभिर, धनगढी फनपार्क, जोकर ताल लगायतका स्थानहरुमा सम्पन्न भएको थियो । पहारी बठनिया गीतमा संगम चौधरी र सुमन चौधरी स्वर दिएका छन् । भिडियोको निर्देशन सुधराम दहित गरेका हुन् भने, भिडियो कैद मुन थारुले गरेका हुन् ।
१५ वर्षदेखि मुम्बईमा सामाजिक काम गर्दै आएका विशालको अर्काे म्युजिक भिडियो समेत बजारमा आउने तयारीमा छ । कृष्णपुर नगरपालिका ४ किचाई सिबिर कञ्चनपुर जन्मथलो भएका विशाल अहिले मुम्बई दहिसरमा बस्दै आएका छन् । यो भिडियो मार्फत धेरैभन्दा धेरै दर्शक, स्रोताको माया र साथको अपेक्षा गरेको समेत बिशाल चाैधरीले बताए ।